Etu esi eji igwe eji eme ihe: Igwe nkpu lathe igwe - TSINFA
otu esi eji igwe lathe: arụmọrụ akwa lathe igwe
Lathe igwe si njikwa ọrụ iwebata
Ọrụ njikwa ọnọdụ
Ọnọdụ arụmọrụ nke eluigwe na alaígwè lathe:
1 Isi moto “mberede nkwụsị” bọtịnụ.
2 Ihe na-agbanwe agbanwe. E nwere ọnọdụ atọ nọ n'ọrụ maka spindles dị elu, ọkara na obere ọsọ na ọnọdụ efu abụọ iji wepu draịva site na draịva ahụ.
3 Isi eri eri. Enwere ọnọdụ abụọ nke "aka nri" na "aka ekpe". Mgbe spindle na-atụgharị n’iru, aka ahụ kwesịrị ịdị “n’aka nri”. Mgbe a na-atụgharị spindle ahụ, aka ahụ kwesịrị ịnọ n'ọnọdụ "aka ekpe", ma ọ bụghị ya enweghị ndepụta, na eri ahụ abụghị Isiokwu mgbochi a.
4 Ogwe mgbasawanye nke pitch. E nwere ọnọdụ abụọ nke "J (nke nkiti)" na "K (gbasaa gbasaa)".
5 Ngwunye na-agbanwe agbanwe. Site na ọnọdụ asatọ, njikwa 2 na 5, ọsọ ọsọ 22 dị.
6 Igwe mgbapụta igwe jụrụ oyi.
7 Na eri ụdị mgbanwe ahụ. E nwere metric (t) alaeze ukwu (a) modulus (m) akụkụ dayameta (p) okpukpu anọ dị elu.
8 (A) na 9 (B) bụ ntọala setịpụrụ edozi maka igbe nri. Gbanwee oke olu nke olulu ma ọ bụ nri, ma jiri aka 8 na 9 mee ihe.
10 Aka abuo. Mkpokọta pitch na-uba na ndepụta okpukpu abụọ na asatọ ọnọdụ.
11, 14 Bụ spindle joystick. Mee ka spindle gbanwee ntụgharị ma kwụsị ntụgharị ntụgharị.
12 Ihe ngosi mmịfe ahụ.
13 Oghere na mmechi aku njikwa. Jiri maka eri.
15 Ejiri aka azụ. A na-eji ọdụ mkpagharị eme ihe.
16 Njikọ ngwa ngwa ngwa ngwa. Kwuonụ na aku maka ọdụdụ. Mgbe a na-etinye ọdụ ọdụ ahụ na nnukwu ibu, ọ naghị ejikarị ya eme ihe mgbe ị na-egbutu ya.
17 Ihe ntanetị na ntanetị na-ahụ maka ihe njide. Ntuziaka nri ogologo na nke nri nri nke onye na-ebu ngwá ọrụ na mmegharị ndepụta na ntụgharị ihu na-emezu site na njikwa ahụ, mmegharị ngwa ngwa n'otu ụzọ ahụ na-achịkwa bọtịnụ nke aka ahụ.
18 Onye na-ejide ngwa ọrụ aka.
19 motorgbọ ala isi “nkwụsị mberede”.
21 Isi moto “mmalite”.
22 Ihe njide ihe eji eme ihe na square.
23 Ihe njide ihe eji eme ihe (etiti mmịfe etiti). Ntugharị akwụkwọ ntuziaka (nke otu puku na-agbatị ma gbasaa, kpachara anya mgbe ị na-arụ ọrụ igwe iji gbochie mmerụ ahụ).
24 Mpịakọta igbe ogologo igbe slide ahụ: Jiri wiilị ụkwụ a mgbe ị na-ebugharị onye na-ejide ihe a na-arụ.
Atọ-Na-eche Banyere Onwe Gị
Isi ihe na-echebara onwe ya ihu atọ bụ ihe eji arụ ọrụ na aengine lathe, na usoro ya na ọdịdị ya na-egosi na Ọgụgụ.
Mgbe etinyere chuck spana n'ime oghere oghere nke bevel pinion 2, nnukwu bevel gia 3 na-agbagharị. Nnukwu bevel gia 3 nwere eriri dị larịị n'akụkụ azụ, a na-ejikọkwa eri ahụ dị larịị na ihu ihu ihu nke mpeji 4, ka enwere ike ịmegharị mkpịsị ụkwụ atọ n'otu oge maka ije centripetal ma ọ bụ centrifugal. Mpempe onwe onye na-echekarị banyere onwe ya dị na 150, 200, 250.
Malite na Kwụsị nke Metal Lathe
1.Choputa ma akwa Lathe di na onodu di nma. Nke ahụ bụ, na ntụgharị na - agbanwe agbanwe - ga - anọ na nnọpụiche (ọnọdụ 0), ihe eji arụ ọrụ na - arụ ọrụ 11, 14 kwesịrị ịnọ na steeti nkwụsị, oghere njikwa na mmechi ga - adị na “on”, yana isi moto “mberede nkwụsị” bọtịnụ 1 na 20 nọ na "Mepee" Ọnọdụ (bọtịnụ gbapụta). Mgbe ị kwadoro njehie ahụ, mechie isi ọkụ ọkụ n'azụ akọrọ lathe, dị ka egosiri na Ọgụgụ.
Lathe ike isi mgba ọkụ
2. Pịa bọtịnụ mmalite akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ 21 na sadulu ịmalite igwe.
3. Bugharia ihe nkedo a na-agbanwe agbanwe 2 na ngwa ngwa ahọpụtara, bulie njikwa akara spindle 11 ma ọ bụ 14 elu iji ghọta ntụgharị ihu nke spindle; n'etiti njikwa akara dị n'etiti iji ghọta na spindle nkwụsị; njikwa ahụ dị ala iji chọpụta ihe ntụgharị na-atụgharị.
4. Mgbe ị na-ebudata ma na-ebudata ihe eji arụ ọrụ, na-agbanwe ngwá ọrụ ahụ, na-atụle nha arụ ọrụ ma na-agbanwe ọsọ ọsọ, pịa bọtịnụ moto "nkwụsị mberede" ma ọ bụ nkwụsị 20 mbụ.
5. N'ihe mberede, pịa bọtịnụ "Mberede nkwụsị" 20 nke isi moto iji kwụsị spindle nke lathe.
6. Mgbe a na-akwụsị lathe ruo ogologo oge, a ga-agbanyụrịrị isi mgba ọkụ lathe.
Ọrụ Mgbanwe Spindle Spindle
Enwere ike iji spindle shifting ejiri 2, 5 iji dozie spindle speed site na 11 ruo 1400 r / min.
Ọrụ nke igbe ihe ngosi
1.Longitudinal handwheel nke counter-clockwise na-atụgharị slide igbe 24 ， Tụgharịa slide igbe longitudinal handwheel elekere 24 ， ma bugharịa sadulu ahụ n'aka nri. Grid ọ bụla na ọkpụkpọ lathe bụ 1 mm.
Ọrụ a Longitudinal ndepụta 150 mm, mgbe longitudinally weghachiri 130 mm.
Ọrụ b laghachi 20 mm longitudinally na 186 mm longitudinally.
2.Turn the tool holder clockwise (middle slide handle) 23, Onye na-ejide ihe eji eme ihe na-eme ka onye ọrụ ahụ pụọ (ntụgharị, na mbido n'ime ngwá ọrụ ahụ); ma ọbụghị ya, a na-ewegharị ya na mpụta.
N'etiti mgbatị skateboard dị n'etiti, achọrọ ka ị na-agagharị na nwayọ nwayọ, na-achọ ka aka abụọ na-agbanwe ma na-agagharị n'enweghị ihe ọ bụla, na-amata ọdịiche nke ịdọghachi na nkwụsị, na mmeghachi omume na-agbanwe agbanwe na mmegharị ahụ ziri ezi.
Efere dị na efere bụ 0. 05 mm.
Ọrụ a Gbanwee slide ọnụ ọgụgụ na efu ọnọdụ na-eri nri na kehoraizin direction 2 m m.
Ọrụ b Gbanwee ọnụ ọgụgụ mmịfe ahụ na 25 na nloghachi azụ na 1mm.
3.Turn obere mmịfe ahụ aka klookwaisi iji mee ka obere mmịfe ahụ gaa n’ihu; gbanwee obere ihe mmịfe ahụ na-agagharị na ntanetị iji mee ka onye na-ejide ngwa ọrụ gaa n'azụ.
Omume obere skateboard scale na-achọ nwayọ na ọbụlagodi, na-achọ aka abụọ ịmegharị ọzọ.
Ngwunye ọ bụla na obere ọkpọ skateboard bụ 0. 05 mm, na izu bụ grid 100.
Akwụkwọ ozi dị n'etiti ọnụ ọgụgụ ihu na ọnụ ọgụgụ nke mkpụrụ ndụ.
Ọrụ a Gbanwee obere slide ọnụ ọgụgụ ka efu ọnọdụ na-eri nri longitudinally 3 mm.
Ọrụ b Gbanwee obere slide ka nha nke 42 na ụzọ ogologo laghachi na 12. 5 mm.
Ọrụ nke Igbe Nri
Dabere na ntanetị na ntanetị, chọpụta ọnọdụ nke wiil aka na aka na igbe nri ma dozie. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ahọpụtara ndepụta ogologo ka ọ bụrụ 0. 307 mm / r, mezie ụdị mgbanwe mgbanwe ụdị eriri 7 na metric (t), igbe nri, ma ọ bụ njikwa 8 (A), 9 (B) ka 1 , ejiri abụọ 10 ruo III.
Dabere na pitch nke machined eri, lelee aha nke igbe ndepụta.
Ọrụ Nri Motorized
Bugharịa ihe na-ejide ngwa ọrụ ogologo oge na ntanetị ntanetị 18 ka ntụziaka ya kwekọọ na ndepụta ndepụta ogologo; ọ bụrụ na ị pịa bọtịnụ ọsọ ọsọ dị n'elu nke aka ahụ, enwere ike ịmegharị sadulu ahụ ogologo oge.
Mgbe ejiri aka 18 banye n'ọnọdụ infeed, pịa bọtịnụ ọsọ ọsọ dị n'elu iji mee ka onye na-ejide ngwa ọrụ ngwa ngwa na mpụta.
Ọrụ Onye Ọrụ Ngwá Ọrụ
Gbanwee ihe njide ihe eji arụ ọrụ na ntinye aka na ntanetị 22, onye na-ejide ihe eji eme ihe nwere ike gbanwee ya n'oge ntụgharị ka ọ gbanwee ọnọdụ nke ngwaọrụ ntụgharị; mgbe ejiri 22 gbanwere na elekere, a na-ekpochi onye na-ejide ngwá ọrụ.
Tailstock uwe gwara
Dika egosiri na onu ogugu, enwere ike idozi ogwe aka nke ogwe aka nkpuchi aka nke ozo iji dozie ogwe aka na ebe a choro. Wụpụta ogwe aka na-edozi ọdụdụ 25 n'oge elekere dị iche iche iji hapụ ọdụ ahụ
Tailstock uwe tupu na ichighaazu ọrụ
Tụgharịa ura aka nke na-enweghị aka na klọọkụ 15 mee ka aka uwe ọdụdụ ahụ pụta; gbanye ugba idị ụkwụ nke na-adọkpụ na-agagharị na ntanetị, na ọdụ ọdụ ọdụ azụ na-eweghachi azụ.
Ofu ọdụ ọdụdụ
Wụpụta ọdụ azụ ngwa ngwa ngwa ngwa azụ 16 azụ (pụọ na onye ọrụ ya), mee ka ọdụdụ ahụ, mee ka ọdụdụ ahụ dị ogologo n'akụkụ akwa ahụ gaa ebe achọrọ, wee mezie ọdụ ahụ gaa n'ihu (n'akụkụ onye ọrụ ahụ) Oche ahụ na-ejide ngwa ngwa ahụ 16 mee ngwa ngwa chebe ọdụdụ ahụ n'elu ihe ndina ya.
Iche echiche onwe-Chuck iwepụ Nzọụkwụ
1 Nzọụkwụ na ụzọ maka iwepu ihe ndị na-eche banyere onwe ha
(1) Tọghe ihe nkedo atọ ahụ ma wepụpụta obere bevel atọ ahụ.
(2) Tọpụ ihe nkedo atọ ahụ 7 Wepu ihe mkpuchi uzuzu 5 na akwa bevel 3 nke nwere eriri dị larịị.
2. Usoro nke itinye atọ jaws
Mgbe arụnyere chuck ahụ, a na-etinye square nke chuck spana n'ime oghere oghere nke bevel gear ka ọ gbanwee, na atụmatụ planar nke nnukwu bevel gear na-agbagharị. Mgbe nkedo nke eriri dị larịị tụgharịrị ka ọ bịaruo oghere ụlọ ahụ, a na-agbanye nọmba jaw 1 n'ime oghere ụlọ ahụ. A na-eburu jaws abụọ fọdụrụ n'usoro nke Nke 2 na nke 3, na usoro nke itinye ihe bụ otu ihe ahụ dị na mbụ.
3 Chuck loading na ebutu omume na spindle
(1) Mgbe ị na-etinye akwa ahụ, buru ụzọ hichaa njikọ njikọ ma gbanye mmanu iji hụ na izi ezi nke nrụnye ahụ.
(2) Mgbe a na-atụgharị ahịhịa ahụ na spindle, a ga-ejikọtara ụgbọelu nke flahu na ụgbọ elu nke spind.
(3) Mgbe ị na-ebutu ngwongwo ahụ, tinye ebe dị elu nke osisi siri ike ma ọ bụ ọla edo dị nro n'etiti mkpịsị aka n'akụkụ nke ọzọ nke onye na-arụ ọrụ na elu nke ụzọ nduzi ahụ, wee gbanwee mpe mpekere ahụ n'akụkụ ebe dị nso ma jiri nwayọ tụgharịa nkwekọrịta ahụ . Mgbe ahịhịa ahụ tọpụrụ, ị ga-akwụsịrịrị ụgbọ ala ahụ ozugbo wee jiri aka gị mee ka atụgharị ahụ ghara.
4. Ihe edeturu
(1) Mgbe ị na-ebudata ma na-ebutu efere na-agwụ ike na spindle, tinye mkpanaka ígwè n'ime oghere spindle ma kpoo akwa akwa iji gbochie mmebi nke akwa akwa.
(2) Mgbe ị na-eku akwa ukwu atọ, gaa n'ihu na-agagharị na ntanetị wee gbochie eriri nke ewepụghị eriri ka ọ gbanwee.
(3) Mgbe ị na-ebuba obere akpa ahụ, agbanyela ụgbọala iji gbochie ihe egwu.
Usoro maka iwepu njem efu nke ịpị
Mgbe ị na-atụgharị sadulu, slide nke etiti, na obere mmịfe slide ahụ, ọkachasị mgbe ihe ntụgharị ahụ na-agbagharị ugboro ole na ole, ọ bụrụ na aka ahụ agbanweela azụ, achọpụtara na ọkpụkpọ ahụ na-agbagharị, na onye na-ejide ya anaghị emekọrịta Na-agagharị, nke a bụ n'ihi oghere dị n'etiti nkedo dị n'ime na akụ, na-akpata ọrịa strok.
Ọ bụrụ na a na-emegharị ọkpụkpọ ahụ ugboro ole na ole, a ga-eweghachi ya na ntụgharị ihu ọzọ wee wega ya na ogo achọrọ, dị ka egosiri na.